Omakhalekhukhwini be-Zuum noma be-ZTE | Kusuka kuLinux
I-Los Amafoni omakhalekhukhwini njenge Omakhalekhukhwini be-ZTE Zibiza kakhulu, yize lolu hlobo lokugcina lubonwa kakhulu kunokuqala.
Uma ungene esitolo somakhalekhukhwini, kungenzeka ukuthi uke wayibona iselula evela ku- sha ZTELezi zingcingo zomakhalekhukhwini zivamise ukuba nentengo ephansi noma ngabe zinezici ezinhle, kepha amanani azo aphezulu kunalawo we brand Zuum noma ngabe lezi zinezici ezifanayo noma ezingcono, lokhu kungenxa yokuthandwa komkhiqizo ngoba yize zombili zingaqhathaniswa neminye imikhiqizo embuzweni wokuthandwa, i sha ZTE Iyaziwa kakhulu kuneZuum futhi lokhu kudala umehluko wentengo.
Ukuthandwa komkhiqizo kuthinta intengo yemikhiqizo yawo, kungalesi sizathu ukuthi Amafoni omakhalekhukhwini Zijwayele ukushibhile noma ngabe zinezici ezifanayo njengamanye amaselula anamanani aphezulu kakhulu. Omakhalekhukhwini bale mikhiqizo yomibili bahle kakhulu, bobabili banamaselula anemiklamo emihle kakhulu nezici ezinhle, kepha ekugcineni intengo ishiwo ukuthandwa kohlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Omakhalekhukhwini be-Zuum noma be-ZTE